मल ल्याउन सरकारी टोली बङ्गलादेश जाँदै : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश ३ मल ल्याउन सरकारी टोली बङ्गलादेश जाँदै
काठमाडौँ । बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद गर्न नेपाली सरकारी टोली बङ्गलादेश जाने भएको छ । नेपाल र बंगलादेशका सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) मार्फत मल खरीदका लागि समझदारी गर्न नेपाली टोली मङ्गलबार जाने भएको हो ।
सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारीका संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली बङ्गलादेश जाने तयारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चनराज पाण्डे, कम्पनीका खरीद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद पोखरेल र मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अरुण जिसी रहने छन् ।
लकडाउनमा नाका सुनसान : तस्करीको सामान धमाधम बरामद हुँदै
बारा । कोभिड १९ ले गर्दा देशको भारतसँग जोडिएका सम्पुर्ण नाकाहरु पुर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । दुई देशमा आवतजावत पुर्ण रुपमा बन्द भएपछि...
ओभरलोड भेटिए सामान तत्काल झारिने, कारबाही हुने !
काठमाडौं । सरकारले मालबाहक सवारी साधनमा बोकिने सामानमा कडाई गर्ने भएको छ । अबदेखि मालवाहक सवारीसाधनले ओभरलोड सामग्री बोकेमा तत्कालै सामान झार्नुका साथै कारबाही...
अर्थ Dhruba Lamsal - April 4, 2021 0
आइसिसी विश्वकप लिग दुई : नेपाल घरेलु मैदानमा ओमानसित पराजित
भर्खरै Roshan Shrestha - February 5, 2020 0
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु मैदानमा ओमानसँग पराजित भएको छ । ओमानले नेपाललाई १८ रनले हराएको...
Not-to-be-missed Kumar Raut - February 24, 2020 0
कला Dhruba Lamsal - November 21, 2020 0
सिन्धुली । सिन्धुलीमा एकसातामा ५ वटा चोरीका मोटरसाईकल भेटिएका छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले प्रहरीले ५ वटा मोटरसाईकल सहित ५ जनालाई पक्राउ गरि...
Breaking News Kumar Raut - January 1, 2021 0
काठमाडौं । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आज (शुक्रबार)देखि सुरु हुँदै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक ६ महिनामा एकपटक अधिवेशन आह्वान...